पेट बढेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ? यस्ता छन् सजिलै पेट घटाउने अचुक उपाय! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पेट बढेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ? यस्ता छन् सजिलै पेट घटाउने अचुक उपाय!
पेट बढेर टेन्सनमा हुनुहुन्छ? यस्ता छन् सजिलै पेट घटाउने अचुक उपाय!
admin October 6, 2020 October 6, 2020 जीवनशैली, स्वास्थ्य	0
एजेन्सी । मोटोपन अहिले सबैको समस्या हो । कम्प्युटरमा लामो समय बसेर काम गर्ने, र खानपान र रहन सहन समेत नमिल्दा मोटोपन समस्याको रुपमा आउने गरेको छ । वजारको खाना, कसरतको अभावले पनि मानिसलाई मोटोपन हुने गरेको छ । मानिसलाई आफ्नो लागि समय छैन । ब्यवसायीक भागदौडले थप समस्या बनाएको छ । अझ पेट पुटुक्क लाग्ने समस्याले सबैलाई सताएको छ । हामी त्यस्तो समस्याको समाधानका लागि केही उपाय अपनाउन सल्लाह दिन्छौं ।
तल उल्लेखित उपाय अपनाएर दिनमा कम्तिमा आधा घण्टा ब्यायाम गर्न सकियो भने पक्कै लाभ पाउन सकिन्छ ।
शिक्षालयकै कक्षा कोठामा पत्निले आफ्ना पतिको शव देखेपछि…
कोरोनाकै कारण मृत्यु भएकि २५ बर्षिया युवतीकाे यस्तो थियो उपचार!